NgoJuni 16, 1881: ukushona kompristi we-voodoo uMarie Laveau - Afrikhepri Fondation
LeNew Orleans (eLouisana) kwakungenye yezindawo eziphakeme zenkolo yakwaVodou e-United States. IVodou yasungulwa eNew Orleans ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, yangeniswa yizigqila - kepha futhi "Ingekho umbala" - eyalandela amakhosi abo aseFrance abalekela iHaiti Revolution. Njengo "mzala" wayo waseHaiti, i-New Orleans voodoo yayiyi-syncretism yenkolo yamaKhatholika, ekhona eLouisiana - kanye nezinkolo zendabuko zase-Afrika.
Umpristi, uMarie Laveau wayengomunye wezibalo ze-voodoo eNew Orleans. Wazalwa ekhululekile ngo-1794, uMarie Laveau wayeyindodakazi yomtshali we-White kanye nesiCreole, igama elisetshenziswe eLouisiana kubantu abanemvelaphi yase-Afrika, yaseYurophu kanye nabomdabu baseMelika (Abomdabu). Ngo-1819, uMarie Laveau washada noJacques Paris, owokufika waseHaiti owashona ngemuva konyaka ezimeni ezazinenkinga. Le ntokazi yabe isiba ngumcwali wezinwele kumakhasimende amhlophe acebile yabe isingumhlengikazi ngesikhathi sobhadane lwe-yellow fever oluthinte idolobha. Kwakungalesi sikhathi lapho uMarie Laveau aqaliswa khona kwezokwelapha nokusetshenziswa kwezitshalo zokwelapha. Zimbalwa izakhi zokuphila kukaMarie Laveau ezaziwayo. Wayengumfundisikazi odumile nowesatshwayo we-voodoo - womabili ngabantu abamnyama nabamhlophe - imikhosi yabo yayiheha abakhonzi abaningi. Ungusomabhizinisi okhaliphile, wayegxile ezindabeni zezezimali nezothando. UMarie Laveau waba ngumfazi ongekho emthethweni kaChristopher Glapion, isosha ayenezingane eziyi-15 naye. Lolu hlobo lomshado ongekho emthethweni phakathi koMhlophe noFree color laluvamile eNew Orleans, lapho imishado "yezinhlanga" yayivunyelwe khona.
UMarie Laveau ushone ngoJuni 16, 1881. Izimo zokushona kwakhe ziyehluka ngokwemithombo. Amanye amaphephandaba kusukela ngaleso sikhathi abika ukuthi watholakala enqunywe ikhanda lapho abanye bebika ukuthi ushonele ebuthongweni. Amanye amahemuhemu avuse ubukhona bakhe edolobheni ngemuva kwamahora ambalwa kumenyezelwe ukufa kwakhe. Enye yamadodakazi kaMarie Laveau, ebizwa nangokuthi uMarie, yaqala kabusha umsebenzi wayo wobupristikazi. Umuntu odumile esikweni laseNew Orleans, uMarie Laveau ungcwatshwe emathuneni aseSaint Louis lapho ithuna lakhe liqhubeka nokuvakashelwa khona njalo.
Funda udaba oluphelele